Ny AirPods dia mety hanana feo tsy misy fatiantoka miaraka amin'ny fanavaozana araka ny Prosser | Avy amin'ny mac aho
Roa andro lasa izay, Apple dia nanambara ny fiasa Apple Music vaovao. Feo tsy misy fatiantoka ary nitombo ny kalitaon'ny Hi-Fi. Izany no mahatonga azy handeha amin'ny tsena miaraka amin'ny tombony kely kokoa amin'ireo mpifaninana aminy. Saingy, ilay toa vaovao tsara dia nivadika ho baomba satria ny AirPods tsy nahazo tombony tamin'ny sasany tamin'ireo fiasa ireo ary mila tariby hanaovana izany. Zavatra tsy mitombina. na izany aza ny tsaho vaovao dia hoe azo atao izany amin'ny alàlan'ny fanavaozana.
Misy fanantenana ho an'ireo mpampiasa AirPods tsy afa-po fa ny safidy audio lossless vaovao an'ny Apple Music dia tsy hiasa amin'ny rindrambaiko tsy misy tariby. Ilay mpandalina manokana amin'ny Apple, Nanambara i Jon Prosser fa hanolotra fanavaozana i Apple rindrambaiko izay hamela ny headphones hamerina hanatratra an'io fampiasa io.
Nilaza i Prosser fa noho ny Bluetooth no fetra. Ary io fameperana io dia efa hesorina. "Nilazana aho fa misy fanavaozana tsotra amin'ny fotoana rehetra, miasa i Apple mba hahafahan'ny AirPods miasa amin'ny AirPlay," hoy ilay mpandalina. Miaraka amin'ny AirPlay, hampiasa Bluetooth ny fitaovanao hahitana AirPods ho toy ny fitaovana, fa raha vao mifandray dia hamorona fifandraisana izany Wi-Fi manokana handefasana feo eo anelanelan'ny fitaovana. Ary, fipoahana, toy izany ihany, ny AirPods no telefaona finday voalohany mandefa feo tsy misy fatiantoka.
Mpiara-miasa amin'i Prosser Tsy nilaza ny maodely AirPods izay hanohana ny AirPlay aorian'ny fanavaozana. Tsy misy koa daty famoahana ny fanavaozana. Fa Apple mikasa ny hampiditra ny safidy tsy misy fatiantoka ao amin'ny Apple Music manomboka amin'ny Jona 2021. Ka amin'ny fotoana rehetra aorian'ity daty ity.
Ho hitantsika eo raha marina izay lazainy. Satria tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina izany Wi-Fi mandany bateria bebe kokoa, mety hampihena ny fotoana eo anelanelan'ny fiampangana amin'ny vola fohy tsy mahazatra. Izay hanafohezana ny faharetan'ny fampiasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » AirPods dia mety hanana feo tsy misy fatiantoka miaraka amin'ny fanavaozana araka ny Prosser